Free Online Quran; On Line ကုရအန်သင်တန်း – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Free Online Quran; On Line ကုရအန်သင်တန်း
Posted on August 1, 2011August 3, 2011 by kyawkyawoo	Posted in understand Quran.comTagged 000 times; ✓ learn basic Arabic grammar usinganew powerful method of TPI. Videos, al Quran, audio, ကျမ်းမြတ်ကုရအန်, အခမဲ့ On Line ကုရအန်သင်တန်း, ကျော်ကျော်ဦး, မြန်မာ islamic education center, burmese muslim minority, Burmese Muslims, docs... for you to learn & teach! All available for FREE... Right here!, Free Online Quran, Invitation to all Muslim Minorities, islam, Learn and Understand 50% of Quran in just9hours! It is FREE!!! ✓ understand Salah and improve your relationship with Allah; ✓ learn 125 words only that occur in Qur’an 40, learn Quran online, Myanmar Muslim, ppts, religion, Understanding Quran .com	Learn and Understand 50% of Quran in just9hours! It is FREE!!!
✓ understand Salah and improve your relationship with Allah;
✓ learn 125 words only that occur in Qur’an 40,000 times;
✓ learn basic Arabic grammar usinganew powerful
method of TPI.
သင်ကြားပေးတဲ့ လင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့နေရာများမှညီနောင်များ ကတော့ ဗီဒီယို ကိုသင်ခန်းစာ
၁ မှစပြီးအဆင့်ဆင့် သင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့ ၅၀ ရာနှုန်းကို ကိုးနာရီ စာသင်ချိန်အပြီးမှာ အရှင် အလိုတူရင်နားလည်နိုင်
မှာဖြစ်ပြီး အဖိုးအခ ပေးစရာမလိုတဲ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
TPI လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး အခြေခံအာရဗီသဒ္ဒါ
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်မှာ အကြိမ်ပေါင်း၄၀၀၀၀ ပါတဲ့ စကားလုံး ၁၂၅ လုံးကို အခြေခံပြီး
ဒေါက်တာ အဗ္ဗဒူအ ဇစ် က သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။
ဆွလတ် ဝတ်ပြုမှူနဲ့ ကျမ်းမြက်ကုရအန် ရဲ့ အဓိပ္ပယ်ကိုပါရှင်းလင်းသင်ပြ ပေးတဲ့
( အင်တာနက် မြန်နှုန်းနှေးတဲ့ နေရာများမှ သူများ အ တွက် မူလစာမျက်နှာမှ Courses ကို ကလစ် လုပ်ပါ
ပြီးတော့ Children Courseက English ကို ကလစ်လုပ်ပါ၊ အသံ ဖိုင် ဗီဒီယိုနဲ့ သင်ခန်းစာ
များကို Down Load) လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။)
One thought on “Free Online Quran; On Line ကုရအန်သင်တန်း”	December 21, 2012 at 4:24 pm	Myint Myint Maw says:
နာရီ၇၀ သင်တန်းများရန်ကုန်တွင် ရှိ မရှိသိလိုပါသည်။
မမြင်ရသောအရှင်အားကိုးကွယ်ခြင်းRamadan Mubarak 2011